နိုင်ငံတကာဆေးဘက်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေး | Praram9Hospital
ภาษาไทย English 中文 မြန်မာ
สำหรับผู้ป่วยจากต่างประเทศที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลพระรามเก้า ทางโรงพยาบาลมีบริการผู้ประสานงานต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในความหลากหลายของภาษา ทั้ง ภาษาอังกฤษ , จีน, พม่า, กัมพูชา, ญี่ปุ่น, และอาหรับ คอยให้บริการให้ความช่วยเหลือทั้งก่อนการรักษา, ระหว่างการรักษา และหลังการรักษา จากโรงพยาบาล
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 07:00 – 17:00 น.
For all foreigner patient who wishes to availahealth care services of Praram9Hospital, our hospital provides medical interpreter that can speak different languages such as English, Chinese, Burmese, Japanese, Cambodian and Arabic to facilitate and assist your needs on your Pre-Treatment, During Treatment and Recovery.
Monday - Sunday 07:00 - 17:00 hrs.
工作时间 周一至周日 上午07:00点至下午17:00点
ပရာရမ်နိုင်းဆေးရုံတွင် ဆေးဝါးကုသမှုခံယူသော နိုင်ငံခြားသား လူနာများအတွက် နိုင်ငံတကာပြန်ကြားရေးဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်သော ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကို ကျွမ်းကျင်သောသူများမှ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ တရုတ်ဘာသာ၊ မြန်မာဘာသာ၊ ကမ္ဘောဒီးယားဘာသာ နှင့် အာရပ်ဘာသာ စသဖြင့် ဘာသာပြန် ဝန်ထမ်းများရှိပြီး ဆေးဝါးကုသမှုမပြုမှီ ၊ ကုသနေစဉ်နှင့် ကုသပြီး နောက်ပိုင်းအထိ ဆေးရုံမှဝန်ဆောင်မှုစီစဉ်ပေးပါသည်။
တနင်္လာနေ့ - တနင်္ဂနွေနေ့ အထိ။ အခ်ိန္ ၇း၀၀ မွ ၁၇း၀၀။